Qaybo ka ridaya, ridaya Wax u Khasaaray, silica Sol ridaya, ridaya Iron - Tongda
Qaybaha Beeraha Makiinado
Qaybo ka auto
castings mishiino Macdanta
Iron qaybo kabka
qaybo Steel kabka
Silica Sol ridaya
Qaybo ka Door Automatic
Qaybo ka mid farsamo
Pneumatic & Electric Qaybo
Badiyay xumbo ridaya
LUMAY ridaya MUSUQ
shubay badiyay-wax (oo sidoo kale loo yaqaan "shubay maal", "shubay sax", ama cire Perdue in Faransiis).
LUMAY ridaya xumbo
shubay badiyay-xumbo (LFC) waa nooc ka mid ah geedi socodka ridaya evaporative-hannaankii in ay la mid tahay shubay maal mooyee xumbo waxaa loo isticmaalaa hannaanka halkii wax.
Silicon Sol ridaya
shubay Sol silica waa maalgelin geedi shubay caadiga ah ee castings maalgashiga ahama.
Machining waa mid ka mid ah hababka kala duwan, taas oo goosin ka mid ah wax cayriin waa la gooyay galay qaab doonayo final oo size by geedi socodka wax-saarista gacanta.
Jediyay (sidoo kale loo yaqaan wayn) waa habka of gelinayn sheet bir guri ka mid maran ama coil foomka galay jaraa'id jediyay halkaas oo qalab iyo dhiman dusha samaysa
shubay Die waa hab loo shubay bir ah in lagu gartaa qasbo biraha la shubay galay saabka caaryada ah cadaadis sare.
Abuurna waa hab wax soo saarka ah ku lug leh qaabeynta ee biraha la isticmaalayo kooban ciidamada compressive.
shubay Sand, habka loo shubay ugu ballaaran loo isticmaalo, isticmaalaan shubay ciid la isticmaalo si ay u sameeyaan qaybo bir ah oo adag in la samayn karaa ee ku dhow kasta daawaha.
TDS003 ahama Steel
TDS001 ahama Steel
Tongda leh koox xirfadeed ee injineerada ay sameeyaan cilmi-baaris ku saabsan kala duwan ee qalabka iyo sidoo kale horumarinta waxyaabaha OEM macaamiisha. Si loo hubiyo tayada, Tongda dhisay shaybaar taas oo uu leeyahay qalab sida X-ray Tijaabiyaha, CMM, Falanqaynta Instrument Spectrum, Metallographic Imtixaanka Instrument, lnspector walxaha magnetic, qalbi engegnaantooda aawadeed Tijaabiyaha, Impact Test Machine.and Universal Tijaabiyaha Xoog.
Tongda gaadhay sumcad wanaagsan gudaha iyo dibaddaba leh qiimaha ay tartan rasmi ah, oo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo, on-waqtiga dhalmada iyo adeegga wanaagsan-iib aheyn ka dib, Tongda sidoo kale looga golleeyahay in lagu noqdo manufactuer ah taasoo keentay shubay ee Shiinaha.
TDS002 ahama Steel
TDS006 ahama Steel
TDS005 ahama Steel
TDS004 ahama Steel